Tourist souvenir kuba Persia Persia - Brazil Ividiyo Incoko - Bate-Papo!
Nceda khangela ezi zinto zilandelayo amaxwebhu phambi eshiya airport: - incwadi yokundwendwela-tickets - inshorensi-nkqubo - ukuhamba khangela - ikhadi lebhanki letyala-Bank isiqinisekiso xa yokuthumela kwamanye amazwe ukusetyenziswa kwemali (ukuba no ngu ngaphezu kweshumi dollazingamnye umntu ekubeni transported) - umqhubi ke, iphepha-mvume (ukuba uceba ukuba kukrazulwa imoto) - amandla lamagqwetha kuba bobabini abazali (kuba abantwana abajikelezayo kunye omnye umzali). Ukuba umntwana ngu abajikelezayo kunye enye ngabazali, ungalibali ukuzisa amaxwebhu besomeleza budlelwane kwaye notarized amandla lamagqwetha ukusuka omnye umzali. Ukuba umntwana ngu abajikelezayo kunye ozalanayo, umhlobo okanye girlfriend, i-notary uza kubhala phantsi kufuneka imvume kunye abazali (isemthethweni abameli: stepfather, stepmother, umgcini ngokusemthethweni) ngokubhala. Ukuba indawo enye ngabazali ayikho esekwe okanye engekho ixesha elide kucetyiswa ukuba kufuneka isiqinisekiso esivela i-Arhente besomeleza oku kunjalo. Ukuba abazali bakho wokuqhawula umtshato, uyakwazi langoku a wokuqhawula umtshato isiqinisekiso kwaye inkundla isigqibo ukuba nqumamisa umntwana ngomhla umda, apho abazali kwaye eziqinisekisiweyo imvume ye-tourist marko umntwana. Arrival e-airport iiyure ezimbalwa ngaphambi koko, nto leyo kubonisiwe kwi-departure ixesha lenqwelomoya. Ukufumana amaxwebhu e-airport.
Ukuba uyakwazi ukufumana amaxwebhu wakho kwi-airport, kuya kufuneka ukuya utyelelo abasebenzi ke isibali, apho ungafumana impahla lwamaxwebhu (zezulu tickets, vouchers, i-inshorensi), emva koko uza kuphela ubhalise.
Ukuba Ibhodi a boku, kufuneka: - hamba nge-masiko, apho kufuneka uzalise i-masiko Isibhengezo. Masiko declarations ingafunyanwa phambi amaxesha amaninzi ufolo kwi uluhlu lophinda-phindo okanye counters. ukuya kwi-ezintathu dollazi. phezulu ishumi dollazi.
UNITED STATES ngowe-umntu, isixa-mali ukubhengeza kwaye okokuba ngapha red corridor.
ngaphezu kweshumi dollazi. ngamnye umntu, kufuneka ube Bank amaxwebhu kunye nawe. Masiko okufaneleyo ibekwe phakathi wing apho ukhangela kwi - jonga kwi-e-reception kwaye bafumane yakho boarding okokuba. Reception indawo kubonisiwe kwi-Central ungene phambili uhambo iholo - okokuba umda ulawulo. Ngoko ke umhlaba kunye inqwelo moya ngokusebenzisa abalindi ngasesangweni, egama inani kubonisiwe kwi-boarding okokuba. Ukuba ufaka arriving kwi-Persia, kufuneka uzalise i-masiko Isibhengezo phambi boarding i-icacile ukuba isantya phezulu masiko okufaneleyo. Ezi zinto zilandelayo izinto Luggage ingaba umsebenzi-free: a amanyathelo afanelekileyo isixa-mali impahla, jewelry, toiletries, zine - anamashumi cigarettes okanye ezimbini ezincinane iibhokisi ka-icuba, zimbini bottles kwewayini okanye ezinye liqueur, okanye omnye bottle ezimbini iintlobo utywala. UKUSUSELA ENCINANE-SHUTTLE INKONZO KWI-AIRPORT: khangela-kwixesha ngomhla hotel. Luggage unako ukuvutha ngomhla hotel. Ezongezelelweyo iinkonzo kufuneka kuhlawulwa phambi ibhasi arrives. Nceda ahlawule kuba zonke iimpahla neenkonzo (free ukusebenzisa encinane-bar, ngomnxeba, njl. njl.) kwangaphambili. Phezu arrival e-airport, yakho baggage iya kuba ikhangelwe kwi-e-abalindi ngasesangweni. Nceda landela imiyalelo kwi-khangela-kwi-Hae, apho uhambo inani kubonisiwe, isandla phezu yakho Luggage kwaye ukuqokelela yakho boarding kudlula, emva koko uza kuhamba ngokusebenzisa incwadi yokundwendwela ulawulo, apho kuza kufuneka uzalise Isibhengezo ifomu kuba departures. I-ride kulandela departure lounge apho kufuneka azise boarding yakho uhambo.
Republic of the Persia yi lizwe kwi-Umzantsimpuma e-Asia.
Oko iqulathe countless Kweziqithi kwi-Pacific ocean phakathi Gambia kwaye Etaiwan. Oyena ka-Kweziqithi belonging ukuba Persia ingaba Luzon, Mindanao, Palawan, Negros, Mindoro, kwaye kwiphondo Leyte.
UMBUTHO STATES ngowe-umntu, isixa-mali ithumele simahla
I-ubude archipelago ukusuka Emantla ukuba Umzantsi afrika ufumana malunga km ukusuka West ukuya Empuma, ama km ukuya Entshonalanga ye-island bordering yolwandle, kwi-Mpuma - i-Philippine yolwandle, emzantsi Afrika - SELSKOE yolwandle, Emntla Philippine Kweziqithi separates i-island Yasetaiwan ukususela Sasetaiwan narrow khulula Bashi.
Ubude i-uncedo Kweziqithi consist kakhulu iintaba, owona apho yi volcano APO (m) - ebekwe kwi-island ka-Mindanao. Ntaba orenji - i-Archipelago ubani volcanic lemveli kunye nokwandisa seismic umsebenzi. Malunga nesiqingatha i-Persia ngu ngameva tropical rainforests, apho palm imithi, amaqampu imithi, Bunin, rhoqo bamboo, orchids kwaye cinnamon ukukhula. Shrubs kwaye meadows ukukhula kwi i-ubukhulu kwama-m ngasentla nolwandle. Phakathi izilwanyana eziphilayo kwi Philippine Kweziqithi, deer, mongooses kwaye wild boars ingaba uninzi rhoqo zifunyenweyo. Oku kubangelwa ukuba eli lizwe ke fauna ngu lohlobo a libanzi ngezixhobo ezahlukeneyo bird kwaye reptile ke ngoko. Kwiindawo ezingaselunxwemeni amanzi, kukho idla ezininzi iintlobo intlanzi kwaye shellfish, phakathi yokugqibela kukho abaninzi ingakumbi pearls - shells ukuba ingaba ifomu pearls. Ungeniso-visa ukuba Persia wenziwe kwapapashwa kuba Russian abemi. Baya kufuneka incwadana yokundwendwela ukuba siyasebenza kuba ubuncinane kwiinyanga ezintandathu emva end ye-uhambo. Aeroport imirhumo: FP-passenger, ebhalisiweyo ngamazwe boku, ikhulu pesos ne-passenger ke wobulali ngqo uhambo (intlawulo kuphela kwi-FP). Abakhweli-ngamazwe flights kufuneka kucaciswe isixa-mali imirhumo kunye unxulumaniso i-airport okanye kwi-airport ke tourist ulwazi inkonzo, apho unako kutshintshwa ngaphandle phambi kokuba isaziso. I-ukutshintsha kwemozulu ka-Kweziqithi ngu tropical monsoon, kwi-subequatorial indawo emzantsi Afrika ye-kwezityalo.
Ukususela Ngomatshi ukuya kumeyi, i-Persia ngu zinokuphathwa kwaye umhlaba owomileyo.
Ukususela ngojuni ukuya kweyedwarha-isekho ngenxa lemvula. Ukususela kunovemba ukuya kowama-zinokuphathwa imozulu. Amaqondo obushushu kwi coast ngu malunga amathathu eminyaka, kwi-cooler mountainous iindawo. I-ukusetyenziswa kwemali iyunithi ingaba Philippine peso.
Ikhulu pesos centavo.
Kwi-everyday ubomi, banknotes, iminyaka engamakhulu amahlanu anamashumi elinamakhulu pesos kwaye zemali, ishumi amabini anesihlanu centavos. I-bonke professes the Catholic inkolo, Protestants anesithoba, Muslims anesihlanu, inxalenye Persia adheres ukuba esiqhelekileyo beliefs. Ukufumana ngqo zonyango ingqalelo, kufuneka ngoko nangoko uqhagamshelane Umbindi woncedo ngo ifowuni obaluliweyo-nkqubo, kwaye anike abasebenzi kunye lwazi lulandelayo: - ifani, igama insured umntu efuna unyango-nkqubo inani ixesha inkonzo kulindeleke ukuba isicelo kuba aid - indawo insured kwaye elinganayo kuba le ngxelo, ngoko ke landela imiyalelo abasebenzi.
Airport ukhuseleko amanyathelo: - Ukhangele baggage.
Musa ukushiya ngayo unattended, nkqu ixeshana elifutshane - Musa tshintsha e-airport kunye enkulu izixa-mali imali, ngenxa yokuba ezindleleni ngu-hayi ixesha elide xa edingeka. Precautions kwaye tips for hotel indawo yokuhlala: - Ukugcina imali, amaxwebhu kwaye valuables kwi-hotel ekhuselekileyo - ukuba igumbi lixhotyiswe a encinane-bar, nayiphi na drinks nokususwa kwayo ngexesha Lakho hlala kufuneka ihlawulwe kwi-hotel inkonzo ngomhla ka-departure. Ukhuseleko precautions kwi-utyelelo: - phambi ngamnye utyelelo, ukukhangela ubukho balo tickets kuba oku utyelelo - musa kuzisa enkulu izixa-mali yemali - musa kuba emva kwexesha yokubhoda i-ibhasi ekuqaleni utyelelo ngexesha utyelelo arrives punctually umqhubi esingabuthathayo lwalwo nawuphi na imali okanye valuables ekhohlo kwi ibhasi ngexesha misa ngexesha utyelelo lwenkqubo-ungalibali yakho belongings kwi ibhasi ekupheleni utyelelo.
Precautions ngexesha uhambo: -Yenza photocopy yakho personal kwaye yoqobo amaxwebhu, kusenokwenzeka ezingeyo-bephethe okkt-Musa disclose ukuba wesithathu amaqela igama hotel apho ufaka staying kwaye inani Yakho igumbi-kwimeko ubusela okanye ilahleko ye-credit amakhadi, traveler ke, khangela ayisayi kuba irhoxisiwe.
Ke ngoko, unxulumano lwefowuni yakho Yebhanki - ngomhla we-indlela ukuphepha street demonstrations nezinye iziganeko involving enkulu amaqela abantu - xa ufuna abajikelezayo yi-ezothutho, lungisa imali kuba uhambo Ngaphandle kakhulu kufuneka ukuzithwala enkulu izixa-mali imali, musa ukuzithwala imali yakho bags phantsi na iimeko - xa uqinisekile ukuba ndihamba kuba kuhamba kunye nosapho lwakho, ilungelelanise kwangaphambili apho unako kuhlangana iimoto': - Car yerente ngu kunokwenzeka phezu ntetho a incwadana yokundwendwela kwaye i-ngamazwe iphepha-mvume lokuqhuba. Unako ukuze imoto ngomhla yerente-ofisi okanye nge-hotel nolawulo. Ezinye iinkampani ukuba kunikela car yerente iinkonzo kuba olongezelelweyo iimfuno kuba abaqhubi umfanekiso (umqhubi kufuneka, ubuncinane, amashumi elinye okanye amabini anesithathu eminyaka ubudala, yaye umqhubi ke sephepha-mvume kufuneka, ubuncinane omnye okanye emibini ubudala). Xa kokubamba imoto, kwezinye iimeko uza kucelwa ukuba ahlawule ethile Idiphozithi - musa ukushiya imoto unattended neqabane lakho belongings - ahlawule eyodwa efuna ingqalelo traffic kwaye Parking imigaqo kweli lizwe ka-yokuhlala.
филиппинские кыздар: сулуулук жана ден-жана экзотика
Chatroulette kuba free ngaphandle ubhaliso ividiyo iincoko nge-girls free ividiyo-intanethi incoko Dating magicians kwi-Chatroulette ezinzima Dating ividiyo incoko free esisicwangciso-mibuzo roulette kwi-intanethi ngaphandle ubhaliso omdala Dating ubhaliso free Chatroulette ngaphandle ubhaliso umfanekiso Dating